Sawirro: Go’aanadii Ka Soo Baxay Shir Sanadeedka 2016 ee Dalladda Koonfur Galbeed Sweden ee Magaalada Göteborg, Sweden.
arlaadi December 4, 2016 No Comments
Shir sanadeedka dalladda KGS sweden waxaa ka qeybqaatay sanadkaan 2016 jaaliyadaha KGS ee degen wadanka Sweden, gaar ahaan, magaalooyinka Göteborg, Borås, Falköping, Stockholm, Örebro, Eskilstuna/Västerås iyo Jaaliyadaha Hällaförs iyo Gävle oo ay soo gudbiyeen taageerada Shirka.
Sahanka waxbarasahda gabdhaha oo laga qabtay magaalada Baydhabo , taakuleentii agoonta Baidoa, taakuleenta bukaanada Cisbitaalka Baydhabo iyo taakuleenta xarunta dadka miyirka dhiman ee Xarunta dhimirka Baydhabo.
Waxaa kalloo laga wada hadlay qorshayaalka sanadka 2017, waxaana la isku raacay in la gaarsiiyo taakuleenta dalladda gobolada kale ama deegaaanada dadka ka soo jeeeda KGS .
Waxaa kaloo shirka looga hadlay, sidii wax logo qaban lahaa, dhinacyada dhaqanka, gaar ahman dhinaca luqadda Maayga, gaar ahaan, dadka ku hadla Maayga ee waddanka ku cusb ee u baahan inay helaan turjubaano ku hadlo luuqadda Maayga, sidii arintaas wax logo qabanlahaaa.
Waxaa shirka laga soo jeedeyay in la sii wado dadaalada dhinaca TV ay wadaan dhalinayarada Arlaadi Forum iyo sidii loogu qeybqaadan lahaa.
Mustaf Ahmed, Hantidhowrka guud
Bahjo Abdi Ali, xubin
Leyla Mohameed Ahmed, Xubin
11: Af-hayeeenka Dalladda waxaa looo doortay Abdulkari Ahmed Mohamed (Chief Sagaaray)
Waxaa kaloo shirka lagu dhisay, gudi shuuro/marjac, oo la shaqeeya gudinna dhexe ee Dalldadda. Waxaana ka mid ah,
Cabdalla Afrax, Stockholm
Sidoo kale shirka waxaa lagu dhisay gudiga horumarinta Warbaahinta iyo Dhaqanka KGS. Waxaana ka mid ah;
Abdulkadir Mohamed Chief Sagaarey
Abdiaziz Mohamed Ahmed (Dhegacade)
Aden Hassan, Laftagaraaan
Bahja Abdi Ali
Shirka Waxaa kale oo uu Gudoonsiiyaya Shahaado Sharafyo, warbaahino iyo hay’ado ka soo jeede KGS oo loo arkay in ay wax wanaagsan qabteen.
iyo Idiris Abdi Takhtar , G/Kuxigeenka Golaha Babdaada KGS.
Shirka waxa uu ku dhamaaday jawi wanaagsan iyo is afgarad. Shirka kan xigana waxaa la balanqaaday in lagu qaban doono magaalada Borås haduu Eebe SWT idmo.